खुसीको खबर: ए’क्कासी घट्यो खानापकाउने ग्यासको मुल्य ! | प्रमुख समाचार
June 10, 2021 NepstokLeaveaComment on खुसीको खबर: ए’क्कासी घट्यो खानापकाउने ग्यासको मुल्य !
लामो समय पछि खाना पकाउने एलपी ग्याँसको मूल्य घटेको छ। नेपाल आयल निगमले मंगलबार राति १२ बजे दखि लागू हुनेगरी प्रति सिलिण्डर २५ रुपैयाँ घटाएको हो। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रालयको निर्देशन अनुसार निगमले ग्यासको मूल्य घटाएको हो।प्रति सिलिण्डर २५ रुपैयाँ घटाएको हो।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार निगमले ग्यासको मूल्य घटाएको हो ।यसअघि खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य प्रति सलिण्डर एक हजार ४ सय रुपैयाँ थियो । अब उपभोक्ताले प्रति सिलिण्डर एक हजार ३ सय ७५ रुपैयाँमा खरिद गर्न पाउने छन्।